Malunga nathi -Ingbo Haishu Judin yokupakisha iimveliso Co, Ltd.
ImiselweNgo-2009, uJudin Pack Iqela ngumenzi obalulekileyo weekomityi zokutya ezilahliweyo kunye nezitya, ezikwi-Ningbo City, idolophu edumileyo yamazibuko, sikonwabela ukuthuthwa okufanelekileyo, okusizisele amathuba ngakumbi kunye neenzuzo zokhuphiswano kwiimarike zamanye amazwe. Inkampani inamava kwinkonzo zorhwebo lwangaphandle kunye namava olawulo, njengoko ukusebenza kwale nkampani kuzisa amandla amakhulu.
Ukuba nobuchule ekuyileni, ekuphuhliseni nasekuveliseni iikomityi kunye neebhokisi, uJudin Pack unabasebenzi abangaphezu kwe-60 abanobuchule, abaqulunqiweyo abayi-5, kunye nabalawuli abali-10 kubandakanya abavavanyi abasemgangathweni, kunye nomnye umsebenzi onobuchwephesha malunga nabantu abayi-15 abanamava omsebenzi ongaphezulu kweminyaka eli-10, kwaye abasebenzi abangamagcisa abangama-25 banamava angaphezu kweminyaka emi-5 yokusebenza.Okusekwe kumzi-mveliso weekhilomitha ezisibhozo zeekhawuntari, amandla ethu emveliso afikelela kwiziqulatho ze-HQ ezingama-50 ngenyanga. Ngophando oluluqilima kunye nobuchule bophuhliso kunye nezisombululo zokuhlanganisa zokupakisha, sanelisa iimfuno zomthengi wethu kulo lonke ilizwe ngeemveliso zentengiso unyaka nonyaka. Ukuthembela kuyilo olugqibeleleyo, iintlobo ezahlukeneyo, umgangatho omkhulu, amaxabiso afanelekileyo, inkonzo ebalaseleyo kunye nokuhanjiswa kwexesha, iimveliso zethu zithengisa kakuhle kwiimarike zaseMelika, zaseYurophu nase-Asiya.
Inkampani yethu inamava iminyaka elishumi elinanye ekupakweni kwemveliso yamaphepha. Sibonelela ngezinto zeshishini ezininzi ezaziwayo, ezinje ngeBirgma eSweden, Carrefour eSpain naseFrance, kunye neLidl eJamani.
Sinomatshini oshicilelweyo osebenzayo kunye noqhubekeko-uHeidelberg, unokubonelela ngokushicilela nge-flexo, ukuprintwa kwe-offset, kunye nefilimu emnyama ye-PET, isitampu segolide kunye nobunye ubuchwepheshe. Inkampani yethu iqinisekisiwe nge-EUTR, TUV kunye nesatifikethi seFSC. Iimveliso ezenziwe phantsi kweliso labaphathi abagqibeleleyo, abahloli abaqhelekileyo kunye namava.
Ukulandela imigaqo " Ukunyaniseka, uxanduva, ukusebenzisana, ukuBumba izinto ezintsha", UJudin Pack ngoku ujonge ukusebenzisana kakhulu nabo bonke abathengi ngokusekelwe kwizibonelelo zozibini. Nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi okanye undwendwele umzi-mveliso wethu ngeenkcukacha ezithe kratya.